Andro iraisam-pirenena momba ny tandindon-doza sy loza voajanahary | Primature
Andro iraisam-pirenena momba ny tandindon-doza sy loza voajanahary
Mahazoarivo, 15 oktobra 2021 – Nosafidiana manokana nankalazana ny Andro iraisam-pirenena momba ny tandindon-doza sy loza voajanahary ny distrikan’i Tsihombe, Faritra Androy noho ny toetry ny andro amin’iny Faritry iny. Nanome voninahitra izany fankalazana izany ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ireo mpikambana sasantsasany eo anivon’ny governemanta.
Hain’ny fitondram-panjakana, hoy ny Praiminisitra ny maharary ny Faritra Atsimo ka tsy fankalazana fe fankalazana fotsiny izao atao izao fa entina ihany koa hitondrana vahaolana ho fampihenana ny tandindon-doza sy loza any an-toerana. Araka izany dia maro ireo tetikasa sy fandaharanasa napetraka any Atsimo ho fiatrehana ny haintany sy ny tsy fahampian’ny rotsakorana ka mahatonga ny kere sy ny tsy fanjarian-tsakafo.
Eo ireo vahaolana fohy ezaka toy ny fanohizana ny « Caravane du Sud » sy ny Tosika Vonjy Aina, ary ho vahaolana lavitra ezaka dia ny fitarihana ny reniranon’Ifaho ho tonga ao Androy ka hisitrahan’ny vahoaka rano fisotro madio sy hananana rano hahafahana mamboly sy miompy.
Ho fampandrosoana ny Faritra sy ireo distrika ao aminy ihany koa dia maro ireo fotodrafitrasa hapetraka toy ny fanamboarana ny RN13 sy ny RN10, ny fananganana sekoly sy tobim-pahasalamana fa indrindra ny fametrahana ny CRNM izay handraisana an-tanana ireo vahoaka miala amin’ny toeram-ponenany noho ny haintany.
Nanatanteraka fitsidihana arak’asa tao Faux Cap ihany koa ny Lehiben’ny governemanta nandritra izao diany any Atsimo izao.
Nihaona sy nanolotra fanampiana ara-pitaovana sy ara-bola avy amin’ny fitondram-panjakana ho fanohanana ireo fikambanan’ny mpanjono ao an-toerana ny tenany.
Harena sarobidy ny ranomasina, hoy ny Praiminisitra, ka ireo mponina manodidina ny faridranomasina no hisitraka voalohany izany, antony nanolorana ireto fitaovana entina miandriaka sy fiarovana ho an’ireo mpanjono ireto. Hisy ihany koa fanofanana azy ireo hanorina lakana mba hampitomboana isa ireo mpiandriaka ka tsy ireo sambo lehibe no hisitraka ireo harena an-dranomasina fa ny mponina ao an-toerana.
← Fotodrafitrasa ho an’ny Akany fitaizana zaza kamboty eo anivon’ny Zandarmariam-pirenena
Fitsidihana ara-pomba fifanajàna sy fanaovam-beloma →
Fankalazana ny faha-60 taonan’ny Tafika an-dranomasina